धुवाँ भित्र रुमलिएको यौटा जिन्दगी – मेलोमेसो
धुवाँ भित्र रुमलिएको यौटा जिन्दगी
२०७८-०४-०१ १९:४६ मा प्रकाशित
देश, ब्लग, मुख्य खबर
मध्यान्न बाह्र बजेको हुँदो हो घडीमा । पोखरा एयरपोर्ट पछाडिको माउन्टेन म्युजिम जाने सडक । त्यहीँ सडक छेउ भएर म्युजियम जाँदा बोराले छाएको एउटा सानो अस्थाइ टहरा देखिन्छ । त्यही टहराभित्र टुसुक्क बसेकी थिइन् एउटा बुढी आमा । आमा अगाडि थियो, सिमेन्ट मोल्ने कराई । जसमा तीन चार वटा दाउरा ठोसेर आगो बाल्ने तर्खरमा थिइन् उनी ।
पाइला अघि बढ्न मानेनन् । जहाँ थिएँ । त्यही अडिएँ । रातभर दर्केको पानीले दाउरा भिजेको हुनुपर्छ, आगो बलेन् । बरु धुवाँको मुस्लो वरिपरि म’डारिन थाल्यो । सकी नसकी ढुङ्ग्रोले आगो फुक्ने प्रयास गरिन् । सास फुलेर आउँदो हो, स्याँ स्याँको आवाज धुवाँसँगै मिसिएर आएको थियो । केही मिनेटको अथक प्रयासपछि मात्र आँगोको ज्वाला द’न्किन थाल्यो ।
बाक्लो चस्माको फ्रेमभित्रबाट एक नजर कुनातिर डुलाइन् । त्यहाँ रहेको बोराबाट दुई चार वटा हरिया मकैका घोकाहरु निकालिन् । अनि राखिन् आगो बलेको कराई माथि । प्लाइको टुक्राले धुवाँ हम्काइन् । चिम्टाले मकै ओल्टाइपोल्टाईन् । विस्तारै आगाको रापले मकैका खोयाहरु पोलिगए अनि पटपट आवाजसँगै पाक्न थाल्यो मकै । मकै किन्न आउनेहरुलाई मकैको खोयामा पोलेको मकै राख्थिन् अनि छेवैमा टिमुरको अचार । स्वाद मानी मानी खान्थे आउनेहरु । अनि आमालाई दिन्थे प्रत्येक मकैको चालिस रुपैँया ।
बिहान खाना खाएपछि सधैं यहीँ आउँछिन् उनी । अनि साँझ छ बजे मात्र फर्किने दैनिकी रहेछ । दिनभर उहीँ काम, धुवाँ पुत्याउने, मकै पोल्ने । यसैबाट आउने पैसाले डेराको भाडा तिर्छिन्, औषधी उपचार गछिन् अनि घरखर्ची यसैबाट धान्छिन् । जेनतेन एक सरो ज्यान चलेको छ, आजको दिनसम्म । तर त्यति सहज कहाँ छ र ? धुँवाले सास फेर्न कठिनाइ पार्दछ, दम बढेर आउँछ तर धुँवासँगै नखेली कहाँ बल्छ र साँझ बिहानको चुलो?
‘हाम्रो गाउँतिर त गोरु जोत्दा मकै र अन्य खेतीपाती खान्छन् भनेर मुखमा मुखौटी लाउने गरिन्थ्यो । अहिले हेर सबैले थुतुनो दिनभर ढाकेर हिँड्नुपर्ने जुग आयो । मान्छे अधर्मी भए । पापी बढे, लोभले संसार ढाक्यो । यसैको बदलामा मान्छे सिद्याउने खेल हो भगवानको । अरु केही हैन,’ कोभिड महामारी बारे उनी बोल्न थालिन् । पहिलो कोरोना लहरमा महिनौं उनी कोठाभित्र थुनिइन् । न मकै बेच्न पाइन्, न भयो दुई चार पैसा आम्दानी नै । घरखर्ची चल्न धौधौ भयो । अनि उनी लकडाउन सामान्य नहुँदा नहुँदै पनि यहीँ दैनिकीमा फर्किएकी थिइन् ।
लकडाउनमा बाहिर निस्किएर मकै पोलेर बेच्दा पुलिसहरुले केहीँ भनेनन् आमा ? प्रत्युत्तरमा भनिन्, ‘आउँथे नि गाडीमा पुलिसहरु । एकछिन हेर्थे, मकै पोलेको आमा, भन्थे अनि जान्थे । कहिले म मकै पोलेर नि दिन्थे उनीहरुलाई । आफ्नै सन्तानहरु झैं लाग्छन् उनीहरु पनि । उनीहरुलाई नि दुखै छ नि बरा । हाम्रै लागि त दिनरात आफ्नै ज्यानको बाजी राखेर खटिरहेका छन् ।’
जन्म घर उनको तेह्रथुम । जन्मेको केही महिनामै आमा बितेिछन् । आमाको माया र प्रेम उनले अनुभव त के स्पर्श समेत गर्न पाइनन् । केही महिनामै बा पनि बितेछन् । अनि बनिन् टुहुरा । त्यतैतिरका लिम्बुहरुले पालनपोषण गरि हुर्काए । उमेर पुगेपछि उनको बिहे भयो । समयले दो¥याउँदै पोखरासम्म ल्याइपु¥यायो । छोराछोरी जन्मे, हुर्के र आ–आफ्नै बाटो ततेरे ।
एक मात्र सहारा श्रीमान बितेको पनि दशक भइसक्यो । अनि फेरि उनी एक्लै भइन् । ‘छोरा पाए बुहारीलाई, छोरी पाए ज्वाइँलाई । आखिर जीवन त एक्लै पो काट्नु पर्ने रहेछ । नातिनातिनाहरुले बिहे गरिसके होलान् । तर कहिल्यै एकपल्ट आमा भनेर बोलाउन समेत आएनन्,’ यति भनिरहँदा आँखाहरु रसाएका थिए उनका ।
उनलाई आजकल साथ दिने उनको त्यही सुनसान डेरावाला कोठा न हो । महिनाको पाँच वटा हजार बुझाउँछन् घरबेटीलाई । औषधीमुलो खर्च पनि त्यस्तै हुन आउँछ । एक जनालाई भएपनि बिहान बेलुका चुलो त बाल्नै पर्ने । धन्न अहिलेसम्म जेनतेन चलिरहेछ उनको जिन्दगी । कुन दिन रोगले थला पर्ने हो, त्यहीँ न हो डर । महत्वाकांक्षी सपना साँधेका छैनन् उनले ।
बस, बिहान बेलुकाको चुँलो बलोस् घरमा । ‘शहर मान्छे नै मान्छेले भरिसके । धान फल्ने फाँटमा घर फलाइसके, अनि कौसीमा तरकारी । सारा शहर यसरी सम्पत्ति, सम्मान र पैसाको यति भोगी भइसकेको छ कि मानवता विलिन हुँदै गइरहेको कसैलाई थाहा पत्तै छैन । लाग्छ, मृत शहर बनिसक्यो पोखरा,’ मनको कुन्ठा पोख्छिन् उनी ।
हरेक बिहान एक जनालाई तरकारी मन्डीबाट हरिया मकैहरु भरिएका बोरा मगाउँछन् । आफ्नै ज्यान भारी लाग्छ उनलाई, कहाँ बोक्न सक्नु बोराभरिको हरिया मकै । नजिकैको काठ मिलबाट केही दाउरा ल्याउँछिन् । अनि सुरु हुन्छ उनको व्यापार । दिनको व्यापार खुबै भए सात आठ सय रुपैँया । कति त भोलि ल्याइदिन्छु भनेर फर्केरै नआएका सम्झनाहरु छन् उनीसँग ।
तर उनमा पैसा नतिरी जानेहरुसँग कुनै गुनासो छैन । ‘नभएरै दिएनन् होला । वा बिर्से । म बुढीको पसिना खाएर पुग्छ भने पुगोस् उनीहरुलाई ।’ सोचेजस्तो सहज त कहाँ छ पैसा कमाउन ? गर्मीमा खलखली पसिना, अनि जाडोमा कटकटी घुडाहरु खान्छन् । यति सहेरै त जेनतेन बलेको छ बिहान बेलुकाको चुँलो ।
उमेरले ८८ पुगिन् आमा, नब्बे सालको भूकम्प जाँदा १० महिनाकी थिइन् रे । रसिला मकै र चोपिलो चट्नी सिध्याएर बिदा माग्दै गर्दा सोथे, ‘आमा, तपाईको नाम के नि ?’ । मुसुक्क मुस्कुराउँदै जवाफ दिइन्, ‘सहारा । सबैको सहारा । मकै पोलेर सबैको पेट भराउने सहारा ।’ तर उनी आफैं एक्लै भएकी उनैलाई पत्तै छैन ।
पर्यटन र कृषि प्रदेश समृद्धिका आधार: मुख्यमन्त्री पोखरेल
२०७८-०४-१२ १७:४७ मा प्रकाशित
२०७८-०४-१० १७:५२ मा प्रकाशित
मलाई अन्याय गरियो
२०७८-०४-१० १७:३९ मा प्रकाशित
गण्डकीमा माओवादीतर्फका मन्त्री फाइनल
२०७८-०४-०७ २१:०२ मा प्रकाशित
मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा संक्रामक रोग अस्पताल निरीक्षण
२०७८-०४-०७ २०:४८ मा प्रकाशित
३१ हजार पोखरेलीले पाएनन् कोभिसिल्डको दोस्रो डोज
२०७८-०४-०४ १८:४७ मा प्रकाशित
गण्डकीको यातायात कार्यालय १० गतेदेखि सञ्चालनमा आउने, कोटा सिस्टमबाट सेवा दिइने
२०७८-०३-०८ १६:३० मा प्रकाशित
कास्कीमा निषेधाज्ञा १५ गतेसम्मः सवारीमा जोर, बिजोर प्रणाली लागू(सूचनासहित)
२०७८-०३-०६ १९:५५ मा प्रकाशित
दीपक मनाङे भन्छन्: ‘मान्छे खान नपाएर मर्न लागि सक्यो, कहाँ मन्त्रीमण्डलको कुरा गरेर हुन्छ अहिले?’
२०७८-०३-०६ १७:५२ मा प्रकाशित
बनेपा घटना: श्रीमती र छोरा मारेर रातभर ओछ्यानमै
२०७८-०३-०६ ११:३६ मा प्रकाशित
सेतो पोषाकधा’री से’नाः कहिले कोरो’नासँग, कहिलेबा’ढीपहि’रोसँग जु’ध्दै(भिडियोसहित)
एमालेले स्पष्टीकरण सोध्न लागेका सम्भावित सांसदहरु (सुची सहित )
कुम्भमेला बाट फर्केका पूर्व राजा दम्पति लाई कोरोना संक्रमण
आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट दोब्बर बजेट ल्याउने प्रयास गर्छु : मन्त्री खड्का
२०७८-०४-१० २०:०३ मा प्रकाशित
© 2021 MeloMeso - Designed by MPG Solution.